Home Wararka DFS oo gabi ahaanba laga mamnuucay qeybo ka mida Muqdisho! Farmaajo oo...
DFS oo gabi ahaanba laga mamnuucay qeybo ka mida Muqdisho! Farmaajo oo lagu soo koobay Villa Somalia (Sawiro)
Gabi ahaanba waxaa maanta kala xiran guud ahaan magaalada Muqdisho, Waxaana magalaada inteeda badan laga mamnuucay ciidanka Farmaajo, kooxaha uu ku adeegto Farmaajo oo ay ku jiraan wasiiradiisa ayaa isugu aruuray Hotel Dacel kaasoo ku yaalo Garoonka diyaaradaha ee Aadan Cade Dhexdiisa.
Dhanka kale Saraakiisha ciidanka ayaa dhankooda diiday in ay amarkiisa fuliyaan, gaar ahaan saraakiisha ku abtirsata beelaha Hawiye. Sida MOL loo xaqiijiyay waxa kaliya ee ku soo haray in ay fuliyaan amarkiisa waa saraakiisha ku haybta ah isaga.
Halkaan ka daawo muuqaalka Muqdisho ee maanta: